Darpan Nepal – क्यान्सर, डायबिटीज पेट सम्बन्धि रोगको अचुक औषधी “सखरखण्डको पात”
१. सखरखण्डको पातले स्वास्थ्यमा हुने फाइदा: जाडो महिनामा पाईने सखरखण्ड आइरन ,भिटामिन बि (फोलेट),कपर ,म्याग्नेसीयम ,आदिले भरिपूर्ण हुन्छ। जसले प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउछ। छालामा चमक ल्याउँछ र अनुहार छिटै खुम्चीनबाट जोगाउँछ। यो कुरा त धेरैलाई थाहा नै हुन्छ तर तपाईलाई थाहा छ सखरखण्डको पात पनि फाइदाजनक हुन्छ भनेर। कुनै कुनै ठाउँमा सखरखण्डको पात तरकारी अथवा झोलका रुपमा पनि बनाउने गरिन्छ। यसमा भिटामिन बि ,आईरन,क्याल्सियम ,जिंक ,प्रोटिन र अन्य पातजन्य तरकारीको तुलानामा धेरै न्यानो हुन्छ। आउनुहोस सखरखण्डको पातले स्वास्थमा दिने फाइदाका बारेमा जानौ।
२. डायबिटीज रोकथाम गर्न: सखरखण्डको पातले मधुमेह नियन्त्रण गरि डायबिटीज कम गर्न राम्रो मानिन्छ । यसमा एफएबीएल(FIBL) नामक तत्व पाइन्छ जसले मधुमेह कम गर्न सहयोग गर्छ। यसका साथै यसमा एसिडिक ग्‍लाइकोप्रोटीन पनि पाइने भएकोले एंटी-डायबिटिक बनाउछ जसले गर्दा प्राकृतिक रुपमा मधुमेह नियन्त्रण हुन्छ।
३.रक्तचाप कम गर्न: सखरखण्डमा भएका भिटामिन ,पोलीफेनोलिक्स र एंथोसायनिनको कारणले यसका पातको तरकारी बनाएर खानाले रक्तचाप कम गर्नलाई सघाउनुका साथसाथै चिन्ता र तनावबाट पनि टाढा राख्छ ।
४.पेट सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न: सखरखण्डको पातमा डाईटरी फाइबर र जलापिन नामक तत्व हुन्छ जसले पेट सम्बन्धि रोगबाट टाढा राख्न सहयोग गर्छ । जसले कब्जियत,पखला र वाकवाकी जस्ता समस्यालाई निको पार्न सघाउँछ । यसका साथै सखारखण्डको पात ज्वरो कम गर्न ,जाडो र फ्लु बाट टाढा राख्न सहयोग गर्छ ।
Previous Postघरमा दियो बाल्दा यो दिशामा बाल्नुहोस Next Postटन्सिलले सतायो ? त्यसो भए यसरी घरमै उपचार गरौं